तपाईको छिटो बिर्सिने बानि छ ? यस्तो गर्नुहोस् ! - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा तपाईको छिटो बिर्सिने बानि छ ? यस्तो गर्नुहोस् !
तपाईको छिटो बिर्सिने बानि छ ? यस्तो गर्नुहोस् !
चाखलाग्दो कुरा admin November 30, 20200Comment
काठमाडौँ छिटो बिर्सिने बानि छ | अनेकौँ कारणले आथवा कामको चापले तपाईँ हामी एकै छिनमा केही कुरा बिर्सिन्छौँ भने, एक पटक भनेको कुरा केही समयपछि नै के भनेको थियो भनेर सोच्न थाल्छौँ । तर, हामी त्यो के कुरा हो भनेर ठम्याउन नसक्ने हुन्छाै ।
यस्तै समस्या यदि तपाईलाई पनि छ भने आज हामीले त्यसलाई सम्झिनका लागि अपनाउनु पर्ने केही जानकारी छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार धेरै भुल्ने समस्या खास पौष्टिक तत्वको कमीका कारण निम्तिएको हो ।
यस्तो अवस्थामा खानेकुरामा ध्यान दिएर यो समस्या हल गर्न पनि सकिन्छ । के खाने त ?
जसले दिनहुँ ओखर सेवन गर्छन् उनीहरुमा स्मरण शक्तिको बढोत्तरी हुन्छ । ओखरमा ओमेगा थ्री फ्याट्टी अम्ल, प्रोटिन, फाइबर, एन्टी अक्सिडेन्ट जस्ता आवश्यक तत्व पाइन्छ ।
२. दालचिनी, मरिच चिया, कफी तथा बेसार
बेसार, चिया, कफी, दालचिनी तथा मरिचको नियमित सेवनले समेत मस्तिष्कको क्षमता वृद्धिमा सहयोगी हुने विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणले पुष्टि गरेका छन् ।
यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट पाइन्छ जसले मस्तिष्कका कोषको क्षयिकरण हुनबाट बचाउँछ ।
दहीमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, चिल्लो, क्याल्सियम तथा फोस्फोरस जस्ता लवणहरु पाइन्छ । यसले सरीरमा लाभदायी जिवाणुलाई समेत फाइदा पुर्‍याउँछ भने हानिकारक जिवाणुलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्छ । दहीमा एमिनो एसिड पाइन्छ जसले दिमागी तनाव कम गरी स्मरण शक्तिमा बढोत्तरी गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।
जाइफलको सेवनले सरीरलाई चिसोबाट बचाउने मात्र होइन यसमा हुने विशेष तत्वले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न तथा स्मरण शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ ।
अलैँचीमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन तथा फाइबर हुने भएकाले यसको सेवन समेत मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।